आमाछोरा बाख्राको खो रमा क’ष्टपूर्ण ! ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भू इँमा सुतेर जीबन का’ट्दै – Butwal Sandesh
आमाछोरा बाख्राको खो रमा क’ष्टपूर्ण ! ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भू इँमा सुतेर जीबन का’ट्दै
यासोक बस्तीको बीचमा सानो घर छ । घर छेउछाउ दु र्गन्ध फैलिएको छ । साँघुरो घरको सिकुवामा खाल्डाखुल्डी र फोहोर छ । घरभित्र साँघुरो कोठा छ । एकापट्टि बाख्रा बाँधिएको छ भने अर्कोपट्टि खाना पकाउने चुलो छ । बाख्राको पिसाबले कोठा नै दु’र्गन्धित छ । तर त्यही दु’र्गन्धित कोठामा ८० वर्षीया वृद्धा देवीमाया बुढाथोकी र उनका ५१ वर्षीय छोरा शेरबहादुर बुढाथोकी बस्दै आएका छन् । फोहोर र दु’र्गन्धले देवीमाया लामो समयदेखि बि रामी भएकी छन् । यो कहा लीलाग्दो अवस्था पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–१ स्थित बुढाथोकी बस्तीको हो ।